कला र मनोरंजन, थिएटर
थिएटर "घर" (सेन्ट पीटर्सबर्ग) एक पेशेवर स्टूडियो देखि 20 औं शताब्दीको 80 वर्ष मा खडा भएको छ। आफ्नो मुग्ध पार्ने संगीतको - समकालीन र शास्त्रीय काम असाधारण प्रदर्शन।
को थिएटर बारेमा
थिएटर "घर" यसको स्थायी कलात्मक निर्देशक र प्रमुख अभिनेता दिमित्री Podnozovym द्वारा स्थापित भएको थियो। देर '80s आफ्नो व्यावसायिक Pushkin को शहर मा स्टूडियो मा, गठन भएको थियो। 1996 मा, कम्पनी सेन्ट पीटर्सबर्ग सारियो।
कोठा को थिएटर स्थित छ जसमा, सानो छ। सडक देखि सीधा प्रेक्षालय गर्न प्रवेश। को लाउने कोठा मा कलाकार अगाडि मार्फत जानुहोस्। को foyer सानो छ। वालपेपर पर्खाल सट्टा विभिन्न वर्ष को पोस्टर संग papered। प्रवेश मा दर्शक को थिएटर को इतिहास बारे र सुन्न इच्छुक सबै प्रत्येक प्रदर्शन को कुरा गर्ने धेरै अनुकूल र सहयोगी प्रबन्धक छन्। हल 80 दर्शक अधिकतम समायोजित गर्न सक्छन्।
थिएटर "घर" (Kamennoostrovsky प्रत्याशा, 55) - गैर-सरकारी संस्था आधिकारिक स्थिति बिना। टोलीमा धेरै सानो छ। "घर" - यो बच्न व्यवस्थित छ जो कोठामा, मा केही थिएटर को एक छ र पनि सूचनाहरू सङ्कलन। सफलता को रहस्य त्यहाँ नीति मुग्ध पार्ने संगीतको ठूलो ध्यान हो भन्ने छ।
"घर" - यो सबै माथि, एउटा प्रयोगात्मक प्रयोगशाला छ। उहाँले - सेन्ट पीटर्सबर्ग सबैभन्दा रहस्यमय हलहरूमा। सबै थिएटर प्रदर्शन एक अचाक्ली दार्शनिक दृष्टिकोण र improvisation को स्वतन्त्रता द्वारा प्रतिष्ठित छन्। सामान्य दर्शक सानो जानिन्छ जो नाटकहरु लागि सिर्जना गरिएको प्रदर्शन को सबै भन्दा, यो अक्सर समकालीन playwrights द्वारा काम गर्दछ।
तिहार "शब्द र शारीरिक" को थिएटर मा स्थान लिइरहेको छ। यसको रूपरेखा भित्र, "Osobyanka" को चरण मा संगीत र प्लास्टिक तैयार छन्।
थिएटर अक्सर कोठामा ensembles दुवै रूस र विदेश बीचमा विभिन्न चाडहरूमा भाग लिन्छ। आफ्नो प्रदर्शन गर्ने विजेता भएको छ। को Lexicon को विवरण 2003 मा "स्वर्ण मास्क" को लागि मनोनीत गरिएको छ।
2001 मा, थिएटर को मुख्य निर्देशक को ए Slyusarchuk थियो। उहाँले दार्शनिक र अस्तित्व विषयवस्तुहरू एक निर्माता रूपमा संसारमा ज्ञात छ। उहाँले जइस Pavic, Fosse, Arrabal, Nietzsche, Ionesco कामहरू संग काम गरे। व्यापार कार्ड "हवेली" आफ्नो प्ले यूजीन Ionesco द्वारा प्ले मा "राजा मर्छ" छ। को प्रीमियर आफ्नो 2008 मा भयो। चरणबद्ध अझै मुग्ध पार्ने संगीतको हटाइयो गरिएको छैन, र नै सबै भन्दा दर्शक मा प्रिय रूपमा, पूर्ण घर जान्छ।
यसको थिएटर चरण मा अक्सर आफ्नै साइट नगर्ने, वा अन्य शहर र देशका भ्रमण मा आ अन्य कोठामा समूहहरू, लाग्छ।
थिएटर "घर" आफ्नो दर्शकहरूलाई निम्न प्रदर्शन प्रदान गर्दछ
"म आफ्नो पत्नी थियो।"
"को चेरी बगैचा मा Seagull"।
"त्यसैले Zarathustra बोले"।
"को Werewolf को पवित्र पुस्तक।"
"उडान मा खेल्ने।"
"केहि को स्वाद को एक धेरै।"
"आनन्द देखि म निको छैन।"
"राजा मर रहेको छ।"
थिएटर "घर" त्यहाँ धेरै सानो कम्पनी हो कि सबैभन्दा फरक छ। यो केवल आठ अभिनेता रोजगारी प्रदान गर्दछ।
थिएटर "घर" दर्शक originality निर्माण प्रेम। Panina र अलेक्जेन्डर Slyusarchuk - दुई ठूलो निर्देशकबाट प्रदान प्रदर्शन को originality। जूलिया - स्नातक SPGATI। उनको थियोसिस कथन पर्व को विजेता थियो। Yu.Panina "Kalamitsi" थिएटर (हल्याण्ड) र नाटक को येल स्कूल (संयुक्त राज्य अमेरिका) मा एक अभिनेत्री रूपमा काम गरे। निर्देशक रूपमा जूलिया सेन्ट पीटर्सबर्ग मा विभिन्न थिएटर संग collaborated। को "हवेली" Panov 2006 देखि काम गर्दछ। यसको निर्माण को धेरै पुरस्कार सम्मानित र विभिन्न चाडहरूमा विजेताहरु भयो गरिएका छन्।
एलेक्स Slyusarchuk - स्नातक GITIS। उहाँले मास्को र बर्लिन धेरै थिएटर मा, एक अभिनेता र पेस्कोभ मा एक निर्देशक रूपमा काम गरे, त्यो सिकाउनुभयो। एलेक्स मात्र निर्देशक छैन, उहाँले एक playwright थियो। उहाँले फिलिमहरु लागि स्क्रिप्ट लेखे र थिएटर लागि खेल्छ। आफ्नो काम धेरै धेरै युरोपेली भाषामा अनुवाद गरिएको छ। आफ्नो नाटकहरु मात्र छैन रूस मा प्रदर्शन मंचन थिए। आफ्नो कविता साहित्यिक anthologies मा प्रकाशित गरिएको छ। को थिएटर को मुख्य निर्देशक "घर" एलेक्स 2001 मा सुरु भयो। साथै, उहाँले निर्माण मा भूमिकाको प्ले। बारम्बार उहाँले तिहार को विजेता बन्यो। उहाँले "स्वर्ण मास्क" को लागि नामांकित भएको थियो।
थिएटर "घर" दर्शक देखि समीक्षा फरक हुन्छ। तर तिनीहरूलाई को विशाल बहुमत - यी प्रशंसा शब्दहरू छन्। दर्शक तिनीहरूलाई शक्तिशाली ऊर्जा संग एक अविश्वसनीय प्रतिभाशाली मान्छे वर्णन, lavish प्रशंसा अभिनेता दिनेछ। सार्वजनिक मनपर्ने - दिमित्री Podnozov। सार्वजनिक उहाँले एक एकल प्रदर्शन खेल्छ पनि भने, कार्य को सारा समयमा टाढा हेर्न यो असम्भव छ देखि भनेर भन्छन्। नाटकीय प्रदर्शन, दर्शक, अविश्वसनीय प्रतिभाशाली र रोचक अनुसार, तिनीहरूले कब्जा र आफ्नो सास पकड, मञ्चमा के भइरहेको छ हेर्न बाध्य छन्। धेरै दर्शक प्रत्येक कथन एक पटक भन्दा बढी उपस्थित।
सबैभन्दा सार्वजनिक प्रदर्शन लोकप्रिय - एक "जहाज Exupery," "साथीहरूको Gynt," "राजा मर रहेको छ," "हल्का," "त्यसैले Zarathustra बोले", "केटी र मिलान", "बेरियर"।
कहाँ र त्यहाँ कसरी?
धेरै बासिन्दा र सेन्ट पीटर्सबर्ग शहर को आगंतुकहरुलाई थिएटर भ्रमण गर्छन "मकान।" यो असाधारण संस्था कहाँ छ? गाह्रो छैन पत्ता लगाउनुहोस्। आफ्नो ठेगाना: Kamennoostrovsky प्रत्याशा, घर नम्बर 55. सबैभन्दा सजिलो तरिका मेट्रो मा थिएटर प्राप्त गर्न। हामी "Petrogradskaya" स्टेशन प्राप्त गर्न आवश्यक छ। त्यहाँबाट Karpovka (नदी) तिर पैदल पालना गर्नुहोस्। यो सडक पार र संख्या 55 (को कट्टर) संग घर को चोकमा प्रोफेसर Popov जान आवश्यक छ। को थिएटर गर्न मेट्रो स्टेशन बाट बाटो 10 मिनेट लाग्नेछ।
रूसी पेट्रोजाभोड्स्क सांगीतिक थिएटर: तस्बिर र समीक्षा
ब्यालेट "हंस पोखरी"। Tchaikovsky गरेको ब्यालेट "हंस पोखरी"
सारांश: "राजकुमारी Turandot"। Karlo Gotstsi परी कथा "Turandot"। प्ले "राजकुमारी Turandot" (Vakhtangov थिएटर)
"Apart": एक एक धनी इतिहास र मुग्ध पार्ने संगीतको साथ थिएटर
मेरिना Brusnikina - थिएटर शिक्षक र निर्देशक
कीव थिएटर: सूची, तिनीहरूलाई को सबै भन्दा प्रसिद्ध को विवरण
स्वादिष्ट cupcakes। कचौरा-केक कसरी सजाउनु गर्न
हक्की खेलाडी बबी Orr: जीवनी र खेल मा उपलब्धिहरू
तपाईं कसरी वजन घरमा छिटो गुमाउन थाहा छैन? मद्दत गर्नुहोस्!
आर्थर Schnitzler: जीवनी, रचनात्मकता, प्ले
बन्दूक चट्याङ्: एक समीक्षा र disassembly विधि
सुझाव गृहिणी: कसरी ओवन मा Pies Bake गर्न
आफ्नो हातले नालीदार बोर्ड को छत: डिजाइन र रूपरेखा। आफ्नो हातले नालीदार बोर्ड को छत: काम को अनुक्रम
Sliders रातो-eared। फिड र समावेश दुवै
पटाया होटल - साँच्चै शाही छुट्टी
Dzhosh Lukas: छोटो जीवनी
Petunia कसरी चिमोटे र यसलाई सधैं गरिन आवश्यक?